Sawirro kii dadka ku Laayay Turkiga oo lasoo bandhigay & Dalalka ay ka soo jeedaan Dadkii dhintay (daawo)! | kowtharmedia.com
Home WARAR Sawirro kii dadka ku Laayay Turkiga oo lasoo bandhigay & Dalalka ay ka soo jeedaan Dadkii dhintay (daawo)!
Sawirro kii dadka ku Laayay Turkiga oo lasoo bandhigay & Dalalka ay ka soo jeedaan Dadkii dhintay (daawo)!
Jan 03, 2017WARAR
Ciidamada Sirdoonka dalka Turkiga oo baaritaano xoogan wada ayaa waxa ay ku guuleesteen inay soo bandhigaan Sawirka iyo Muuqaalka Ninkii dadka badan ku laayay magaalada Istanbuul kaas oo watay Qori iyo boorso .
Ninkaan oo wali baxsad ah ayaa waxaa la sheegay inuu u dhashay ama ka soo jeedo dalalka Kirgistan ama Usbekistaan midkood . Ilaa hada kiiskaan ayaa waxaa loo xiray 8-qofood oo meelo kala duwan laga soo qabtay .
Habeenkii sanadka cusub uu soo galaayay ayay eheed markii goob lagu caweeyo (Reina) oo ku taal magaalada Istanbul la weeraray halkaas oo lagu dilay 39-qofood . Dadka dhintay oo iminka sharciyadooda la soo baaray ayaa 26-ka mid ah waxeey noqdeen Ajaanib .
Wakaalada wararka ee DOGAN iyo Jaraaidka Hürriyet ayaa shaaciyay in dadka ku dhintay weerarkaan marka laga reebo kuwa Turkiga ah ay ka soo kala jeedaan wadamada , Saudi Arabia , Belguim , Tunisa , Canada , israel , Marooko , Lubnaan , Russia , Jordan , Kuweit iyo India .
Kooxda Daacish ayaa sheegatay weerarkaan waxaana wali baxsad ah ninkii fuliyay kaas oo dharka badashay . Ninkaan oo watay Qori iyo Boorso dhabarka lagu xirto wuxuu dadkii martida ahaa la dhacay Rasaas lagu sheegay 180-mir mudo 7 daqiiqo ah .
Previous PostMUUQAAL: X/ Dhulbahante ee DF-Soomaaliya oo si kulul uga hadlay Boobka Kuraasta Gobolada WAQOOYI ! Next PostDaawo Sawirro: Silaca ay dadka qaarkood u marayaan sidii ay mar un Yurub u gali lahayaeen!!